Focus on Ciise | Apg29
Waxa aad ku guuleysato on wacdinta wax ku saabsan siyaasadda arrimaha bulshada, Agenda 2030 iyo cimilada?
Ma muddo dheer, waayo, Ciise Masiix aad mar kale ku soo noqon doonaa? qalbigaagu sii saaraynaa dhibaatooyinka halkan dhulka in dhibaatooyin cimilada iyo Agenda 2030?
maanta waxaan ku noolnahay adduun halkaas oo aanu arki dadka ku nool walaaca. Oo markii aan akhriyey Kitaabka Quduuska ah, waxay sheegtay in:
"Character si ay isu muujiyaan in Qorraxda iyo Dayaxa iyo Xidigaha iyo dhulka quruumuhu u xanuunsan doonaan oo shakiyeen, badda iyo hirarka Shacabka noqon doonaa neef baqdin la eegaayo in waxa adduunka ka dhici doona, waayo, xoogagga cirka ayaa la gariirin doonaa.. markaa waa in aad aragtaan Wiilka Aadanaha oo daruur ku leh xoog iyo ammaan weyn. Laakiin goortii uu bilaabo inuu dhici, ka dibna kor u toosin iyo madaxyadiinnana kor u qaada, waayo, aad u samatabbixiyaa socdo. " Luke 21: 25-28.
Focus on cimilada?
Waxaan maanta la kulmo, dadka qaba walaaca badan waxa dhacaya in our cimilada, iyo meesha aan awoodno inaan dadka ogeysiiyo Injiil ma aha on Agenda 2030 ama siyaasadda cimilada. Waa in aynaan diiradda saaraan deegaanka, Agenda 2030, ama siyaasadda arrimaha bulshada, laakiin diiradda waa in indhaha aad on Ciise Masiix iyo imaatinkiisa. Waxa aad ku guuleysato on wacdinta wax ku saabsan siyaasadda arrimaha bulshada, Agenda 2030 iyo cimilada?
Waa in aynaan sida Masiixiyiintu u xanuunsado tan iyo walaaca sida carruurta adduunka ee. waxa qalbiga ku badan ee afku wuxuu ku hadlaa inta badan wuxuu ku yidhi. Ma muddo dheer, waayo, Ciise Masiix aad mar kale ku soo noqon doonaa? qalbigaagu sii saaraynaa dhibaatooyinka halkan dhulka in dhibaatooyin cimilada iyo Agenda 2030? Ciise wuxuu ku yidhi:
"Laakiin iska jira oo miisaankeedu yahay qalbiyadiinna cuslaan dhereg badan iyo sakhraannimo iyo ka welwelidda ifkan in maalintaas lama filaan ah aad daadisaan sida dabin, maxaa yeelay, waxay saameyn ku yeelan doono ku nool dunida oo dhan ugu badan oo dhan. Noqo joogto jeeda oo tukada xoog in ay ka baxsadaan oo dhan Doono dhici oo aad Wiilka hor istaagi. "
Halkii ay ka hadlayaan dhibaatooyinka bulsheed, dhibaatooyin cimilada iyo wixii la mid ah, aynu wax ku wacdiyo oo ku saabsan boqortooyada jannada. Maalin maalmaha ka mid, Ciise Masiix u iman doonaa oo heli uu aroosadda run aad diyaar u maalintaas yihiin? Ama waa in aad leedahay diiradda badan oo ku saabsan yahay kuwaas oo ka gees ah?
Waxaan aad u doonayaa in ay guur oo jannada, oo aan diiradda waa aad noqon doontaa maalinta Ciise Masiix qaado doono uu aroosadda! Toos, Kuwa sidaas oo kale doono Ciise Masiix King of Kings ugu dhakhsaha badan seexdaan. Halkan dhamaadka, qaar ka mid ah aayadaha Bible akhriska iyo wax kasi.
2 Pettrusbrevet 3: 3-4 Iskusoo wada duuboo, waxaad soo xusuusan doonaa in ay wax quudhsada maalmood ee la soo dhaafay, hagi doona naftoodu jeclaydna iyo cidda aad ku kajamaan oo weydiiyo: "Maxaa ku saabsan ballankii imaatinkiisa? Awowayaasheen waxay horay u dhintay, oo wax walba waa sida uu ayaa Tan iyo abuurniinta dunida. "
1 Tesaloniika 5: 2-3 idiin ogahay in maalinta Rabbigu u imanayso sida tuug habeen u yimaado. Just marka dadku waxay yiraahdaan, "Wax walba waa nabad iyo ammaan ah," ka dibna ay musiibo sidii si lama filaan ah sida xanuunka foosha markii qof dumar ah oo ku dhali doontaa, oo waxba ma uu baxsan doono.
Matayos 24: 29-30 Isla markii dhibta wakhtigaas kuwa qorraxdu waa madoobaan doontaa, oo dayaxuna ma nuuri doono. xiddiguhuna cirka waa ka soo dhici doonaan iyo xoogagga cirka ayaa la gariirin. Markaas dabadeed Wiilka Aadanahu wuxuu characters muuqan doona oo cirka jooga, markaas ayaa qolooyinka dhulka oo dhammu barooran doonaan, oo waxay arki doonaan Wiilka Aadanaha oo daruuraha cirka isagoo leh xoog iyo ammaan weyn.
2 Timoteyos 3: 1-5 sidoo kale Tani ogaada, in maalmaha ugu dambeeya, wakhtigii waa adag tahay. Markaasaa dadkii aad u malaynayaa doonaa oo keliya naftooda iyo lacag ah, ay u noqdaan kuwo faan badan, iyo, kibirlow ah, waalidkood caasi ku ah, oo Gaalimo Badan, kuwa sharka leh, iyada oo aan jacayl, adag, ka buuxa aflagaaddada, xarig la'aan, arxan, oo aan lagu bixin wanaagsan, ee sirreyda ah, taxadar la'aan iyo isla weyn. Waxay raaxaysi jecel intii ay Ilaah jecel. Waxay fuliyaan Dhawrsashada sida maaskaro laakiin in loo diido awoodeeda. Joog ka fogaaday iyaga.
Daniel 12: 4 Laakiinse idinku, Daniel, waa sii erayada kitaabkana shaabadee ilaa wakhtiga ugu dambaysta. Qaar badan oo ka doono, iyo aqoonta sii korodhsan doonaa. "
Luke 21: 25-26 noqon doonaa qorraxda, iyo dayaxa, iyo xiddigaha, iyo dhulka aan Yuhuudda ahayn waxay noqon doontaa in cidhiidhi iyo guuxa badda iyo hirarka aawadood. Dadka ku dhiman doonaa of argagax la eegaayo waxa dunida iman doona, waayo, xoogagga cirka ayaa la gariirin doonaa.
Mat 24: 42-44 Haddaba sidaas daraaddeed Watch, waayo, ma aad ogidin maalinta Rabbigiinnu imanayo. Waxaa aad fahmi doonaa in haddii milkiilayaasha ogaa mar waxa habeenka tuug u yimid, inuu sii joogi doono soo jeedo oo isaga ka jabiyay guriga galay sii. Sidaa darteed sidoo kale diyaar u ah in aad noqon, maxaa yeelay marka aad yaraan filayn, goortii Wiilka Aadanahu imanayaa ah.
Matayos 24: 23-24 haddaad tihiin kuwa u sheegay, Waxaad tahay Masiixa ama waa kaas, ha rumaysanina! badbaadshayaal been ah iyo nebiyo been ah u samayn doonaan calaamooyin waaweyn iyo yaabab, si ay u khiyaanayn, haddii ay suurogal tahay aad u doortaan.
1 John 2:18 Carruurtaydiiyey, tani waa markii ugu danbeysay. Waad maqasheen in ka geesta ahi imanayo, weliba imminka badan oo u imid. Laga soo bilaabo tan waxaan fahamsanahay in ay tahay markii ugu danbeysay.
Tani waa email akhriste, views heli qoraa u taagan.